Surlọ ọrụ nchekwa Radarlọ Nche - China Security Surveillance Radar Manufacturers, Suppliers
XW / SR216 Nche onyunyo Radar
Ọrụ na-arụ ọrụ ma jiri radar onyunyo nchedo XW / SR216 bụ nke mejupụtara usoro radar na igbe nchịkwa nkesa ike. A na-eji ya maka nchọpụta, ịdọ aka na ntị na ebumnuche nke ndị na-agagharị, ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ mmiri na mpaghara ndị dị mkpa dịka ókèala, ọdụ ụgbọ elu, na ntọala ndị agha. Ọ nwere ike n'ụzọ ziri ezi nye lekwasịrị Track ozi dị ka amị, anya na ọsọ. 2.Main nkọwapụta Nkebi ịrụ ọrụ kwa Usoro Sistemụ Usoro nhazi usoro (azimuth phase scan) Oper ...
XW / SR215 Nche onyunyo Radar
Ọrụ 1 na-arụ ọrụ ma jiri radar XW / SR215 mee ihe na 1 mejupụtara igwe 1 na igbe nchịkwa nkesa 1. A na-eji ya maka nchọpụta, ịdọ aka na ntị na ebumnuche nke ndị na-agagharị, ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ mmiri na mpaghara ndị dị mkpa dịka ókèala, ọdụ ụgbọ elu, na ntọala ndị agha. Ọ nwere ike n'ụzọ ziri ezi na-enye Track ozi dị ka iche na ọnọdụ, anya na ọsọ. 2.Main nkọwapụta ITEM Performance parameters Ọrụ sistemụ usoro nhazi usoro (azimuth phase scan) Ọnọdụ ọrụ Pu ...
XW / RB101 Nche onyunyo Radar
Ọrụ na-arụ ọrụ ma jiri radar onyunyo nchedo XW / RB101 bụ nke mejupụtara usoro radar na nkwụnye ọkụ. A na-eji ya maka nchọpụta, ịdọ aka na ntị na ebumnuche nke ndị na-agagharị na ụgbọ ala na mpaghara ndị dị mkpa dịka ókèala, ọdụ ụgbọ elu, na ntọala ndị agha. Ọ nwere ike n'ụzọ ziri ezi nye lekwasịrị ọnọdụ, anya na soro ọmụma dị ka ọsọ. 2.Main nkọwapụta ITEM Performance parameters Ọrụ sistemụ usoro nhazi usoro (azimuth phase scan) Ọnọdụ ọrụ Pulse ...